China omenala ebipụta oghere polyester na-agba ọsọ t uwe elu logo na ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọhụụ
Nyere ndị otu gị aka ịnọ jụụ ma pụta na ụdị arụmọrụ a dị elu. Zuru oke maka egwuregwu na otu dị iche iche na-achọ akwa arụmọrụ dị elu.
Ndị a 100% micro-polyester mkpụmkpụ aka uwe na-agba ọsọ Chiefs na-mere si kasị mma wicking oru arụmọrụ ákwà, iche n'akụkụ na aka uwe panel. Ejiri akwa eji eji aka ya mee ya ma jiri akwa ya tinye ya aka.
Nyere ndị otu gị aka ịnọ jụụ ma pụta na ụdị arụmọrụ a dị elu. Zuru oke maka egwuregwu na otu dị iche iche na-achọ akwa arụmọrụ dị elu. Onweghi onye n’agaghi acho Tshirt a!
Nke gara aga: omenala ihuenyo ebipụta larịị dịghị ika adụ ụmụ nwoke isi gburugburu olu Heather agba tri-ngwakọta t uwe elu
Uwe elu Men′S
Uwe elu Men′ST
omenala breathable 100% polyester mmiri wickin ...